पत्रकार रबि लामिछानेको अर्को काम तीन करोड नेपालीको हार्दिक सलाम !
Home / समाचार / पत्रकार रबि लामिछानेको अर्को काम तीन करोड नेपालीको हार्दिक सलाम !
पत्रकार रबि लामिछानेको अर्को काम तीन करोड नेपालीको हार्दिक सलाम ! 0
हामीले कार्यक्रमको यस अघिको अंकमा निधन भईसकेकी एक युवतीको रहस्यमय भिडियो प्रशारण गरेका थियौँ । आत्महत्या गर्नुअघि आफुलाई कसैले आत्महत्याको अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै बाबु आमाको नाममा क्षमा माग्दै आफ्नै फोनमा भिडियो रेकर्ड गरेकी यी युवती गोरखा आरुघाट २ मान्वकी अस्टमी गुरुङ थिइन् ।
उनको शबसँगै आएको उन्को ब्यागमा फोन भेटियो । फोनमा उनका आफन्तले हेर्दा अष्टमीले म्योसज रेकर्ड गरेकी रहेछिन् । उनका आफन्तले मोवाईल चेक गर्दा भिडियो भेटिएको हो । जसले अस्टमीले आत्महत्या नगरी उनको हत्या भएको कुरालाई पुष्टि हुन्छ । हामीले प्रशारण गरे लगत्तै संसारभरका नेपालीको ध्यान आर्कषण भएको छ ।
भिडियोमा उनले आफुलाई बलत्कार गर्ने अरेवियन गल्फ जेनेरेज म्यान्टिनेन्स एण्ड क्लिनिङ एजेन्सी सुपरभाईजरको नाम लिएकी छिन् । साईमन काजी भन्ने ती बंगलादेशी व्यक्ति हुन् । यिनको फोटो र डिटेल एनआएएन युर्एइका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले उपलब्ध गराएका छन् । श्रेष्ठ कुनै पनि हालतमा ती व्यक्तिलाई समात्नु पर्ने भन्दै लागि परेका छन् ।
जनकपुरका मतदाता भन्छन्-माछालाई चारो हालेझैं भए नेताका आश्वासन
कुन सपना देख्दा कस्तो फल मिल्छ ? कस्तो सपना अरुलाई सुनाउनु हुदैन ? जानी राखौ